Somaliland: Taliye xilka laga qaaday
HARGAYSA-Taliyihii laanta socdaalka Somaliland Gaashaanle sare Maxamed Cali Yuusuf "Cambaro", ayaa xilkii laga qaaday, waxana beddelkiisa la magacaabay Maxamed Cismaan Caalin oo horraantii 2012-kii xilkan banneeyey.
Inkastoo aan warbaahinta loosoo bandhigin wareegtada taliyahaas xilka lagaga qaaday, haddana wararka laga helayo laanta socdaalka, ayaa sheegaya in wasiirka Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Waran-cadde uu xilka ka qaadistaas iyo magacaabistaanba sameeyey, iyadoo aan si rasmi ah loo ogayn sababta isbedelka keentay.
Taliyaha labadalay, ayaa mudooyinkii dambe ku howlanaa taalloobin ay kamid ahayd kasaarista Somalia dadka ajaanibta iyadoo hadda gaba-gabo dhaweyd muddo bil ah oo u qabtay.
Ciidamada Somaliland oo qabtey dablaydii dishay taliyaha
Somaliland 04.03.2016. 10:37
HARGEYSA, Somaliland- Xukuumadda Somaliland, ayaa shaacisay in ciidamadeeda ammaanku gacanta kusoo dhigeen 8-nin oo kamid ahaa dablaydii dhawaan gobolka Saaxil ku dishay talihii ciidanka booliska ee deegannadaas xukumayey.
Wasiirka arrimaha gudaha Cali& ...
Mudaraahaadyo ka dhacey degaano ka tirsan Somaliland
Somaliland 02.03.2016. 14:40
Xukuumada Siilaanyo oo adkeysay amaanka garoomada.
Somaliland 11.02.2016. 06:40
Ethiopian la masaafurinayo oo shil ku dhintey
Somaliland 20.01.2016. 22:46
Ajaanib laga masaafurinayo Somaliland
Somaliland 20.01.2016. 00:08
Al shabaab oo Labo u dhalatay dalka India ku dishay Jilib
Soomaliya 02.07.2017. 12:55
Jahwareerka siyaasada ee Galmudug oo dagaal dhiig ku daatey lagu soo afjaray 29.02.2020. 14:10